Indawo enhle enkabeni yeSwitzerland - I-Airbnb
Indawo enhle enkabeni yeSwitzerland
U-Graziella Ungumbungazi ovelele
Uyemukelwa ekhaya lami elincane eBrunnen echibini elihle laseLucerne. Indawo yami itholakala endaweni ezolile futhi enobungane. Ngesikhathi sokuhlala kwakho wamukelekile ukuthi uhlale engadini yami evulekile futhi ujabulele ilanga lase-swissy. Ikhaya lami likude ngezinyathelo ezimbalwa nje ukusuka esiteshini sesitimela nesiteshi samabhasi (imizuzu engama-40 ukuya eZug, eLucerne noma eZürich).
Ngesikhathi sasentwasahlobo nesehlobo unethuba lokubhukuda, ukugibela izintaba ukhuphukele ezintabeni eziseduze, i-SUP, ukugibela isikebhe, ukugibela isikebhe ukuya eLucerne nokunye okuningi. Ngesikhathi sasebusika zonke izinhlobo zezemidlalo ezifana nokushushuluza, ukuhamba ngezinyawo ebusika, i-snowboarding, i-skating nokunye okuningi. Imizuzu embalwa kuphela ukuya endaweni ehlukile ye-ski efana ne-Stoos, i-Rigi, i-Pilatus noma i-Andermatt (ingafinyelelwa ngemoto noma ngesitimela).